Imisa ayaad dooneysaa inaad hurudid? - BBC Somali
Imisa ayaad dooneysaa inaad hurudid?
Cilmi baarayaal ka socda ururka hurdada Mareykanka ayaa sheegaya inay jiraan baahiyo kala duwan oo hurdada ah oo ay qabaan koox da'aad kasta, sidaa daraadeedna adiga waa intee baahidaada hurdo?
Inta badan dadka waa ay yaqaanaan marka aysan helin hurdo aan ku filneyn balse imise ayaa ku filan qofka? Cilmi baarista dhawaan ay Mareykanka sameeyeen ayaa sheegeysa in jawaabta ay ku xiran tahay da'ada.
Joogteyn la'aanta waqtiga hurdada, waxyaabaha kiciya jirka sida qaxwaha, cabitaanada awoodda keena, saacadaha lagu kaco iyo iftiinka maalinti ayaa ah waxyaabo dhammaan wax ka badala wareegga loo yaqaano saacadda jirka.
Kuwa ka yar da'ada dugsiyada oo jira 3 ilaa 5 sano ayey tahay inay hurdaan 10 ilaa 13 saacadood. In ka yar 8 saacadood ama ka badan 14 saacadood ma haboona inay hurdaan.
Dhalinyarada da'adoodu u dhexeysa 18 ilaa 25 ayey tahay inay hurdaan inta u dhaxeysa 7 ilaa 9 saacadood balse wixii ka yar 6 ama ka badan 11 ayeysan habooneyn.